The Importance Of The Lost Kingdom Of Mapungubwe
Afrikan Civilization September 13, 2021 <November 7, 2021
The Lost Kingdom Of Mapungubwe in Limpopo Province, South Africa is important because it was the first modern Iron Age Settlement which had an Aristocracy in Southern Africa.
Origins Of The Kingdom Of Mapungubwe
Dating back circa 1075-1200 AD, the Kingdom of Mapungubwe as thought to have begun as a Hunter gatherer settlement at the confluence of the Limpopo and Shashe Rivers.
With the Kingdom Of Mapungubwe’s earliest roots being traced to what is termed the Leopard Kopje K2 Culture, the Hunter-gatherer community would eventually evolve into Southern Africa’s first modern Iron Age Settlement State with the establishment of a settlement at Mapungubwe Hill.
The Kingdom Of Mapungubwe began with trade in Gold with Arab traders from the East African Coast which is thought to have provided the impetus for changes in the Hunter-gatherer Culture at Mapungubwe as traded goods like Gold and beads replaced Cattle as a measure or wealth.
This change in the Kingdom Of Mapungubwe resulted in the emergence of Southern Africa’s first Aristocracy which grew out of the class system that was borne out of the new trade-based economic system at Mapungubwe Hill.
For the first time in Southern Africa, the Kingdom Of Mapungubwe has been set up with an Aristocracy that was separated from the general population by taking up residence on the sacred hill at Mapungubwe.
New skills in pottery and Goldsmiths which produced high value Golden objects like the famous Rhino and Gold Scepter also emerged in the Kingdom Of Mapungubwe.
Sadly, the History of the Kingdom Of Mapungubwe was deliberately distorted by South Africa’s previous Apartheid regime which attempted to propagate the lie that the site of the Kingdom Of Mapungubwe was not the work of Africans.
The African origin of the site of the Kingdom Of Mapungubwe has since been placed beyond dispute, and the Kingdom Of Mapungubwe remains one of Africa’s most important sites because it was the first African Settlement in Southern Africa to develop an Aristocracy.
To date, the reasons for the Kingdom Of Mapungubwe’s decline are unclear as the site was abandoned around 1200.
All in all, it can be said that Kingdom Of Mapungubwe is important because the Kingdom Of Mapungubwe established the first Aristocracy and model of a Proto-Culture for a class-based Society built on wealth obtained from trading in Southern Africa.
This new type of African Society that emerged in the Kingdom Of Mapungubwe was led by an emergent Aristocracy, and would be the model of subsequent Iron-Age African Settlements starting with Great Zimbabwe.
earthchronicles, lostafrica, mapungubwe
Egypt’s Osirian Revolution: The World’s First Revolution
Previous articleSicilian Mafia: The Falcone Assassination
Next articleThe Hollow Earth UFO Conspiracy